Lwesihlanu 1 Januwari 2021
I-Equestrian Complex Imiklamo ephelele yokwakha kanye neyendawo ihlanganisa zonke izakhiwo eziyisithupha ziveza ubunikazi bokusebenza ngakunye. Ama-facade anwetshiwe ezinkundla zezitebele nezitebele eziqondiswe kumgogodla wezokuphatha. Isakhiwo esinamacala ayisithupha njenge-crystal grid sihlala ngohlaka lwamapulangwe njengomgexo. Onxantathu bezindonga abahlotshiswe ngokusatshalaliswa kwengilazi njengemininingwane ye-emerald. Ukwakhiwa okumhlophe okugobile kugqamisa ukungena okukhulu. Igridi ye-facades nayo iyingxenye yesikhala sangaphakathi, lapho imvelo ibonwa khona ngewebhu ebonakalayo. Ama-Interiors aqhubeka nengqikimba yezakhiwo zamapulangwe, kusetshenziswa isikali sezakhi ukukala ngokulingana kwabantu.
Lwesine 31 Disemba 2020
Isikhulumi I-Orchestra Iqoqo le-orchestra lezipikha ezidlala ndawonye njengabaculi bangempela. ISestetto uhlelo lokulalelwayo oluneziteshi eziningi lokudlala amathrekhi wezinsimbi ngazinye ngezikhulisazwi ezihlukene zobuchwepheshe obuhlukile kanye nezinto zokwenziwa ezinikezwe ikesi elithile lomsindo, phakathi kukakhonkolo omsulwa, kuzwakala kabusha amabhodi ezwi wokhuni nezimpondo zobumba. Ukuxutshwa kwamathrekhi nezingxenye kubuya kube ngokomzimba endaweni yokulalela, njengasekhonsathini yangempela. ISestetto yi-orchestra yasekamelweni yomculo orekhodiwe. ISestetto ikhiqizwe ngqo ngabakhi bayo uStefano Ivan Scarascia noFrancesco Shyam Zonca.
Lwesithathu 30 Disemba 2020
I-Cafe Le cafe encane efudumele yokhuni etholakala ekhoneni lomgwaqo ngaphakathi kwendawo ethule. Indawo yokulungiselela ukuvulwa evulekile yenza okuhlangenwe nakho okuhlanzekile futhi okubanzi kokusebenza kwe-barista kuzivakashi yonke indawo lapho kuhlala khona ibha noma isihlalo setafula e-cafe. Into esophahleni ebizwa nge- "Shading tree" iqala ngemuva ngemuva kwendawo yokulungiselela, futhi imboza indawo yamakhasimende ukwenza wonke umoya wale cafe. Inikeza umphumela ongavamile wendawo kubavakashi futhi ibuye ibe yindawo yokuxhumana yabantu abafuna ukulahleka emcabangweni ngekhofi yama-flavour.
Esihlalweni Ongaphandle Yomphakathi Ingadi
Lwesibili 29 Disemba 2020
Esihlalweni Ongaphandle Yomphakathi Ingadi IPara iqoqo lezihlalo zangaphandle zomphakathi ezenzelwe ukuhlinzeka ngokuguquguquka okuvinjiwe kuzilungiselelo zangaphandle. Iqoqo lezihlalo ezinendlela ehlukile yokulinganisa futhi ziphambuka ngokuphelele ebhalansi ebonakalayo yemiklamo yezihlalo ejwayelekile Ekhuthazwe ukwakheka okulula kwe-sawaw, le sethi yezihlalo zangaphandle inesibindi, yesimanje futhi iyakwamukela ukuxhumana. Kokubili okunendawo enesisindo esindayo, iPara A isekela ukujikeleza okungu-360 ukuzungeza isisekelo sayo, kanti iPara B isekela ukuphenya okubheka eceleni.
Msombuluko 28 Disemba 2020
Ithebula IGridi liyithebula elenzelwe uhlelo lwegridi ebelikhuthazwa ukwakhiwa kwendabuko kwamaShayina, lapho kusetshenziswa khona uhlobo lwesakhiwo sokhuni esibizwa ngeDougong (Dou Gong) ezingxenyeni ezahlukahlukene zesakhiwo. Ngokusetshenziswa kwesakhiwo sokhuni oluhlanganayo lwendabuko, ukuhlangana kwetafula nakho kuyinqubo yokufunda ngesakhiwo nokuzwa umlando. Isakhiwo esisekelayo (iDou Gong) senziwe ngezingxenye ezi-modular ezingahlukaniswa kalula zidinga isitoreji.
Sonto 27 Disemba 2020
Ifenisha Uchungechunge ISama uchungechunge lwangempela lwefenisha olunikeza ukusebenza, isipiliyoni ngokomzwelo kanye nokuhlukile ngokusebenzisa amafomu alo amancane, asebenzayo nomphumela oqinile wokubuka. Ukugqugquzelwa kwamasiko okuvela ezinkondlweni zemvunulo ezigqokayo ezigqokwa emicimbini yamaSama kuchazwe kabusha ekwakhiweni kwayo ngomdlalo we-conic geometry namasu okugoba izinsimbi. Ukuma kwesithombe kochungechunge kuhlanganiswe nokulula ezintweni zokwakha, amafomu namasu wokukhiqiza, ukunikela ngokusebenza & amp; izinzuzo zobuhle. Umphumela walolu chungechunge lwefenisha yanamuhla olunikeza ukuthinta okwehlukile ezindaweni zokuhlala.
I-Equestrian Complex Isikhulumi I-Orchestra I-Cafe Esihlalweni Ongaphandle Yomphakathi Ingadi Ithebula Ifenisha Uchungechunge